Ireo no mpandresy tamin'ny Macro Photography Awards 2020 | Famoronana an-tserasera
Avy amin'ny fomba fijery izay omen'ny masontsika antsika, malahelo an'izao tontolo izao isika izay miandry ny mpaka sary sasany izay nahazo loka tamin'ny mari-pankasitrahana Macro Photography Awards 2020 maka sary tsara.
Ity sary ity no mamela antsika ankafizo ireo "tontolo" rehetra hitanay ireo nefa tsy niditra lalina tany amin'izy ireo akory isika. Raha tsy hoe, farafaharatsiny, noho ny fijerin'ireto sary ireto izay manaitaitra izaitsizy izay mamela antsika hahita endrika natiora manaitra ny hatsaran-tarehin'izy ireo.
Ireo "mikrokosma" azo vokarina ao amin'ny tahon-kazo iray ihany na mitovy amin'izany ny mahita ny fomba ahamaroan'ny pistilan'ny voninkazo. Ny "International Garden Photographer of The Year" dia nanambara ireo mpandresy ho an'ny Macro Photography.
Ireo sary makro ireo dia mampiseho fotoana hatsaran-tarehy zaridaina sasany manodidina ny planeta tena kely dia kely foana, ary ahitantsika voninkazo, ravina na kankana miloko sy endrika an'arivony.
Mpandresy amin'ity taona ity dia Bruno Militelli avy any Sao Paulo, Brezila, miaraka amin'ny sary «Botanical Loop», fotsy sy fotsy amin'ny voankazo mahavariana. Ny loka faharoa sy fahatelo dia an'i Anne Macintyre tamin'ny "Mountains of Tulip Petals" ary i Zhang Ye Fei ho an'ny "Seeds of Purse Shepherd's".
Avy amin'ity rohy afaka mahita ny mpandresy rehetra sy ny mpandray anjara rehetra ianao amin'ireto mari-pankasitrahana fakana sary makro ireto ary azo antoka fa misy ny sariny hampiala anao; ianao koa tsy manao manina ireo hafa amin'ity boky ity.
Una sary makro tsy mamela ny olona tsy hiraharaha ary izany miaraka amin'ireo mpandresy dia azontsika atao ny mahazo ny fomba fijery izay aseho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny mari-pankasitrahana Macro Photography Awards dia navoaka tamin'ny sary vitsivitsy